खुसीको खबर, इजरायलले एक हजार नेपाली कामदार लैजाँदै, तलब झण्डै २ लाख, जान्नुहोस कहिले र कसरी ? – List Khabar
Home / समाचार / खुसीको खबर, इजरायलले एक हजार नेपाली कामदार लैजाँदै, तलब झण्डै २ लाख, जान्नुहोस कहिले र कसरी ?
खुसीको खबर, इजरायलले एक हजार नेपाली कामदार लैजाँदै, तलब झण्डै २ लाख, जान्नुहोस कहिले र कसरी ?
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायलमा कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
निजी क्षेत्रको संलग्नतामा का’मदार भर्ना गर्दा कामदारमाथि ठूलो आर्थिक शोषण भएको भन्दै नेपाल र इजरायल सरकारबीच गत ३० सेप्टेम्बरमा सरकारी संयन्त्रमार्फत नै भर्ना गर्ने गरी श्रम सम्झौ’ता भएको थियो । याे सम्झौता अनुसार इजरायलमा नेपाली कामदार लैजाने प्रक्रियामा निजी क्षेत्र (म्यानपावर कम्पनी) को कुनै संलग्नता रहने छैन ।
विभागका अनुसार अब जाने का’मदार रोजगारदाताको घरभित्रै रहने गरी नभई स्याहार केन्द्रमा काम गर्ने छन् । यसअघि रोजगारदाताकै घरमै बसी काम गर्ने गरी कामदार लैजाने गरिएको थियो । विभागका अनुसार इजरायल सरकारबाट रोजगारीको माग प्राप्त भएपछि नेपाली दूतावासले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र
जाँचबुझ निर्देशिकाबमोजिम प्रमाणीकरण गर्नेछ । सरकारले इजरायल जान कामदारको मापदण्ड तोकेको छ । २५ वर्ष पू’रा भई ४५ वर्ष ननाघेको, १.५ मिटर उचाइ र ४५ केजी तौल भएको हुनुपर्नेछ । इजरायलको स्थानीय भाषालाई बाध्यकारी बनाइएको छैन । अंग्रेजी भाषाको ज्ञान भए पुग्नेछ ।
कम्तीमा १० कक्षा उत्तीर्ण गरी अनमी वा सीएमएसम्बन्धी विषयको कम्तीमा १५ महिनाको अध्ययन पूरा गरेको वा कक्षा १२ वा सोसरहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरी नेपाल सरकारबाट मा’न्यता प्राप्त तालिम प्रदायक संस्थाबाट केयर गिभिङ सम्बन्धी तीन महिनाको तालिम प्राप्त गरेको व्यक्ति इजरायल जानका लागि उम्मेद्वार हुन पाउने विभागले जनाएको छ ।
कमाइ र कार्यस्थलका हिसा’बले इजरायल दक्षिण कोरियाभन्दा पनि आकर्षक गन्तव्य हो । इजरायल जाने कामदारको न्यूनतम तलब एक हजार ५ सय ४३ डलर (झन्डै एक लाख ८३ हजार रुपैयाँ) रहेको छ ।
Previous चुरापोते, काईयो, ऐना लगाएत अन्तिम पटक श्रीमानले सिन्दुर हालिदिएपछि गरियो अन्तिम बिदाइ (भिडियो सहित)
Next बाढी आएको २६ दिनपछि प्रधानमन्त्री ओली मेलम्चीमा , पीडित प्रति परिवार ५० हजार राहत दिने घोसणा |